KAWL ZIAZA A CHUAK TAKTAK KO CANG UH SALAI CBT UAR A UM KO – The Chinlung Post
Kawl angki le lupawng hruk an kan fial ဗမာတိုက်ပုံအင်္ကျီနဲ့ ခေါင်းပေါင်း ၀တ်ရမယ်တဲ့. A ra laimi Myanmar Martyr Ni (July 19) ulhni kai dingah cozah nih party le buu kip cu an kan sawm i “Myanmar thuam Kawl teikpung angki le KAWL lupawng nan ihruk lai” tiah an ti.
Burma asi pek Myanmarasi pek, teihpung cu Kawl thuam asi, Chin thuam si lo, Karen thuam si lo. Nan thuam cio ihruk uh ti loin Kawl thuam ihruk in rak kai uh an ti caah kei cu ka kai kho lo.Hi ram hi Panglong hnatlaknak in miphun kip fonh in dirhmi asi. KAWL miphun ta lawng si lo. Atucu “kan miphun thuam nan i hruk dih lai” ti tiangin ca an chuah ngam cang.
Sianghngakchia le cozah riantuan pawl Kawl hni fenhter hrimhrim ka doh. NLD nih Kawl pinni teihpung kha party uniform an ser caah cu ruang hrimhrim ah NLD ka si kho ti lo cia. Kawl/miphundang thuam ka hua lo. Asinain hnek/fial chom in hruk kai tim lo. Aruang cu an lungput dawpdolh policy ka theih caah asi. Cucu ka doh.
လာမည့် အာဇာနည်နေ့ (ဇူလိုင် ၁၉)တက်ဖို့ ကျန်တော်တို့ကို မြန်မာဝတ်စုံ–တိုက်ပုံနဲ့ ခေါင်းပေါင်း ၀တ်ပြီးတက်လာပါ(အမှန်က ဗမာလူမျိုးဝတ်စုံပါ)လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်/အစိုးရက ဖိတ်ကြားလာပါတယ်။ ဘာကြောင့် ကိုယ့်အမျိုးသား/ရိုးရာဝတ်စုံနဲ့ တက်လာကြပါလို့ မဖိတ်ကြားတာလဲ။ ဘာကြောင့် တိုက်ပုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းကို ၀တ်ခိုင်းတာလဲ။ ဘာကြောင့် ကျောင်း/အစိုးရ Uniform မှာ ပုဆိုးကို တိုင်းရင်းသား အားလုံးဝတ်ခိုင်းတာလဲ။
ကျန်တော်ကတော့ ၀တ်ချင်လို့ပဲ ၀တ်ရင်ဝတ်မယ်။ အတင်းဝတ်ခိုင်းရင် ဘယ်တော့မှ တိုက်ပုံနဲ့ ပုဆိုးကို မ၀တ်ဘူး–ဒီတစ်သက်။ NLD ပါတီက ပင်နီတိုက်ပုံကို Uniform အဖြစ် သတ်မှတ်နေသည့်ကာလပတ်လုံး ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုံးဝ ပါတီမ၀င်နိုင်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံဟာ ပင်လုံစာချုပ်အရ လူမျိုးပေါင်းစုံက ပူးပေါင်းတည်ထောင်တာ လူမျိုးတစ်မျိုးကပဲ ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံကိုပဲ နိုင်ငံတော်ဝတ်စုံ အဖြစ် အတင်းသတ်မှတ်(၀တ်ဆင်ခိုင်း)တာမျိုးဟာ Uniform သာဖြစ်ပြီး Unity ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ ၀ားမျိုရေးပေါ်လစီ Assimilation Policy ပဲ။. Credit:Salai Ceu Bik Thawng